Nhau - Zvikonzero zvekushandisa Kadhibhodhi Ratidza
Vazhinji varidzi vezvitoro zvekutengesa uye maboutique vanoshandisa matanda ekuratidzira zvigadzirwa zvavo, asi kushandiswa kwemakadhibhodhi pop kuratidza kuri kuvewo kuri kufarirwa.
Iwe unozoona makadhibhokisi ekuratidzira anomira uye masherufu ari kushandiswa panguva dzekuratidzira uye kunyangwe kunze kwezvitoro zvakasiyana senzvimbo yekutenga (POP) inoratidzira. Kana iwe uri kuvhura shopu yekutengesa uye uchifungisisa nezverudzii rwezvinhu zvekuratidzira zvaunofanira kushandisa, hezvino zvikonzero zvinoverengeka nei uchifanira kufunga kushandisa makadhibhokisi pop kuratidzira pamusoro peaya emapuranga: Icho Chichiita Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezve kushandisa makadhibhokisi pop kuratidza ndeye kugona kwayo kwakawanda. Iwe unogona odhiza kadhibhodhi kuratidzwa mune ese maumbirwo uye saizi uye kunyange kusanganisa chero dhizaini iwe yaunoda pasina dambudziko. Tichifunga nezvekuti makadhibhokisi ane mabhokisi chinhu chinokwanisa kuchinjika, chinogona kugadzirwa kuti chikwanise zvaunoda chaizvo panguva ipfupi. Nepo huni dzinogona kuumbwa muhukuru hwakasiyana-siyana futi, maitiro acho anongowanikwa muruzivo semuchina wega wega nemidziyo yekucheka ingangodiwa kugadzira chigadzirwa chekupedzisira. Maitiro ekugadzira haana kunyanya kuoma asi anodhura zvakare.
Inotakurika kana iwe uchida kushandura maratidziro uye kutaridzika kwechitoro chako nekufambisa zvinhu zvakapoterera, unogona kuzviita wega nekuti marata ekuratidzira akareruka uye anotakurika. Paunenge uine matanda ekuratidzira, iwe unofanirwa kuhaya rubatsiro pese paunofunga nezvekuchinja kumisikidza kwechitoro chako. Uyezve, sezvo pakaunda yepamusoro inoratidzwa muAbbotsford BC inopetwa, unogona kuzvichengeta kana kuvaunza kune dzimwe nzvimbo kuti vakwidziridzwe kana kuratidzwa munzira.
Iyo Yakachipa Sezvo newbie muridzi webhizinesi, haugone kushandisa yakawanda kwazvo pakutanga. Fungidzira kuti kuratidzwa kwehuni kumwe chete kwaizodhura zvakadii nekuwanza icho kunhamba yemashefu ekuratidzira kana kumira kwaungade. Kiraundi yepamusoro inoratidzira muAbbotsford BC yakachipa uye yakapihwa kuti inogona kupa zvese izvo mharidzo yematanda inogona kupa, kuishandisa ndiyo ingangodhura-inoshanda sarudzo. Iyo inochinjika Unogona kushandura zviri nyore dhizaini yakazara yemakadhibhodhi ekuratidzira kuti ienderane nemusoro wechitoro chako kune yakatarwa nguva kunyangwe pasina rubatsiro rwehunyanzvi. Semuenzaniso, panguva yezuva revalentine yekutengesa, unogona kuvhara zvese zvako zvimire nepepa tsvuku kana kuwedzera graphic moyo magadzirirwo kuti akwane chiitiko. Kana iwe ukashandisa matanda ekuratidzira, kuashandura kunoreva kuhaya rubatsiro rwehunyanzvi uye kushandisa yakawanda mari.
Zvichipa mabhenefiti mazhinji akatsanangurwa pamusoro, iwe unogona nyore kutaura kuti makadhibhokisi pop kuratidza angabatsira sei bhizinesi rako. Funga nezve izvi zvese zvinhu paunenge uchigadzira yako pfungwa, kuti usazonzwe kuzvidemba pakupedzisira.